ရှင်သန်နေသောအဘို့အပြား Pack ကို Prefab ကွန်တိန်နာအိမ် - တရုတ် Qingdao Xinmao ZT သံမဏိ
နေထိုင်ရန်အတွက် Flat Pack Prefab ကွန်တိန်နာအိမ်
Living ည့်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်းနှင့်ဆက်စပ်သော
နံရံနဲ့ခေါင်မိုး Materils: Sandwich က panel က
တံခါး: လူမီနီယမ်ဘောင်သားညှပ်ပေါင်မု panel ကတံခါးကို။
Size: ပေ 20; 40 ခွကေို
ငွေပေးချေမှုရမည့်သက်တမ်း: 40% T / T, အမိန့်များနှင့်ပေးပို့မတိုင်မီ paid ချိန်ခွင်လျှာဆန့်ကျင်။
Delivery အချိန်: တလအတွင်းမှာပဲသင်အပြည့်အဝပေးချေမှုလက်ခံရရှိပြီးနောက်။
component ရှည်လျားသောရောင်ခြည် 3mm အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
တိုတောင်းသောရောင်ခြည် 2.5mm အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
ကြောကျတိုငျ 3mm အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
မြို့ရိုးကို panel က 75mm EPS သားညှပ်ပေါင်မုဘုတ်အဖွဲ့
ခေါင်မိုး panel က 75mm မှ PU သားညှပ်ပေါင်မုဘုတ်အဖွဲ့
ရောင်ခြည် Z-shaped သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိသံ
insulator တွင်လည်း 75mm polyurethane
ကြမ်းပြင် panel က 18mm အထပ်သား panel ကို + 12mm လမိုင်းကြမ်းပြင်သို့မဟုတ်
20mm ဘိလပ်မြေ-ဖိုင်ဘာ + 2mm PVC
တံခါးပေါက် သံမဏိလုံခြုံရေးတံခါး, 740mmx1950mm
ပြတင်းပေါက် Rolling ရှပ်နှင့်အတူ window ကိုဆွဲယူ PVC, 1100mmx800mm
1. လေကိုခုခံ: အဆင့် 11 (လေတိုက်speed≤ 111.5km / ဇ)
2. ငလျင်ခုခံ: အဆင့် 7
3. အမိုးမိုး၏တိုက်ရိုက်ဝန်စွမ်းရည်: 0.5KN / m2
4. ပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းရေးမြို့ရိုးကိုအပူဂီယာကိန်း: 0.35Kcal / m2hc
5 ဒုတိယထပ် ၀ န်ဆောင်မှုစွမ်းရည် - ၁၅၀kg / m2
၆။ စင်္ကြံ / လသာဆောင် / သွားလာရင်းတိုက်ရိုက် ၀ န်ဆောင်မှုသည် 2.0KN / m2 ဖြစ်သည်
Qingdao Xinmao ZT သံမဏိ Construction Co. , LTD မှကုမ္ပဏီရေတွင်း-ထူထောင်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ကြုံတွေ့နှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်ယှဉ်ပြိုင်အဘိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသော prefab အိမ်များနှင့်ကွန်တိန်နာအိမ်များထုတ်လုပ်အတွက်အထူးပြု။ 50 R & D ဝန်ထမ်းများထက် 2003 ပို၏တစ်နှစ်ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့် 400 ကျော်အလုပျသမားကြီးတွေကစျေးကွက်ဝေစုရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပံ့ပိုး။ သော, Ltd. ရှန်ဒေါင်း Qingyun Xinda အရောင်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအင်ဂျင်နီယာ Co. , ကပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံမှာထုတ်လုပ်မှုနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ပြည့်စုံသည့်စနစ်နှင့်အတူ High-နည်းပညာထုတ်လုပ်မှု-oriented လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာ ISO9001 ၏အရည်အသွေးလက်မှတ်နှင့်သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဆောက်လုပ်ရေးအရည်အချင်းလက်မှတ်အဆင့် II ကိုရယူပေးခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ကဒီဧရိယာထဲမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာဖိလစ်ပိုင်ဈေးကွက်၌အကြှနျုပျတို့၏ရောင်းအားအသံအတိုးအကျယ် No.1 ဖြစ်ပါသည်, အိမ်နှင့်ပြည်ပဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအများကြီးရှိသည်, လည်းငါတို့ပါကစ္စတန်နှင့် Sudan.There အတွက်ထိပ်တန်း3ပေးသွင်းများမှာနေဆဲ ဒူဘိုင်း, အိုမန်, ဥဇဘက်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိစီမံကိန်းများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ထက်ပို 80% ထိုကဲ့သို့သောသြစတြေးလျ, တောင်ဘက်အမေရိက, ဥရောပ, အမေရိက, တောင်အာဖရိက, မြောက်အာဖရိက, အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများအဖြစ်တကမ္ဘာလုံးပို့ကုန်များမှာ
လိုအပ်ပါက * Layout အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
* လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တပ်ဆင်ခြင်းမိတ်ဆက်စကား / CD / installation ကိုပုံဆွဲပေးလိမ့်မည်။
အကြံပေးများနှင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့ * ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အင်ဂျင်နီယာများ။
1) အရည်အချင်း: အီး (DIN18800), ISO9001, BV, SGS;
2) Long ကအချိန် Oversea စီမံကိန်းကိုအတွေ့အကြုံကို;
3) အမြင့်ဆောက်လုပ်ရေးအသုံးတစျခုယူနစ်များအတွက်တနေ့ (2 အလုပ်သမား);
4) 4S အရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်အိမ်တအိမ်ဝယ်ဖို့မယ့်ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူလို;
5) ဦးစုစုပေါင်းစိတ်ကြိုက်: ကျနော်တို့ 10feet, 12feet, even14feet ကျယ်ပြန့်ကဲ့သို့ကျယ်ပြန့်ကွန်တိန်နာအိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးစေနိုင်သည်။
6) နဲ့ Big ကုန်ထုတ်စွမ်းအား: 50 ကျော်ယူနစ်နေ့တိုင်းထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ခဲအချိန်ကိုအတိုကောက်နိုင်ပါတယ်
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံ calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံ Make ရန်ကဘယ်လို
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဆောက်အအုံသည် Method ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
သံမဏိအဆောက်အအုံ & ဖွဲ့စည်းပုံ Co. , Ltd မှ
သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ & သတ္တုအဆောက်အဦးမဂ္ဂဇင်း
Noble 20 FT နျ Standard အကြံအဖန်တွေချည်းရှီပြင်ဆင်ထားသော ...
B ကိုအတူ flat Pack ကိုကွန်တိန်နာအိမ်ကွန်တိန်နာမူလစာမျက်နှာ ...
Prefab အိတ်ဆောင်လူနေထိုင်ရာသံမဏိကွန်တိန်နာ Hou ...
ကွန်တိန်နာမူလစာမျက်နှာ Cabin သင်္ဘောကွန်တိန်နာအိမ်